ISABC ichithwe yinkantolo ngoMotsoeneng | News24
Cape Town – INkantolo eNkulu yaseWestern Cape isichithe isicelo se-SABC sokunikezwa igunya lokudlulisa isinqumo senkantolo ngobeyisikhulu sayo, uHlaudi Motsoeneng.
IDA yafaka isicelo sokuthi kubuyiselwe eceleni isinqumo sokuqokwa kukaMotsoeneng njengeGroup Executive for Corporate Affairs kanti ngoDisemba inkantolo yanquma ukuthi uMotsoeneng angalokothi aye emsebenzini kungakhathalekile ukuthi uya ngokwasiphi isikhundla eSABC, kuze kube kuphela ukuqondiswa kwezigwegwe, noma ukubuyekezwa kwengxenye ethize yombiko walowo owayenguMvikeli woMphakathi, uThuli Madonsela, ngokuziphatha kwakhe.
OLUNYE UDABA: I-SABC isimnikeze esinye isikhundla uMotsoeneng
Phakathi kwezinye zezinto ezatholwa uMadonsela kubalwa nokuthi uMotsoeneng wahubhuza amanga ngeziqu zakhe zemfundo.
UMotsoeneng wasuswa esikhundleni sokuba yiChief Operating Officer (COO) ngemuva kokuthi iNkantolo yokuDluliswa kwamaCala yachitha imizamo yakhe yokudlulisa isinqumo seNkantolo eNkulu yaseWestern Cape neyanquma ukuthi ukuqokwa kwakhe kwakungafanele yabe isikubuyisela eceleni.
IDA isisamukele lesi sinqumo senkantolo.